उनी उता तडपिन्छिन्/म यता हस्तमैथुन गर्छु | SouryaOnline
उनी उता तडपिन्छिन्/म यता हस्तमैथुन गर्छु
सौर्य अनलाइन २०६९ चैत १९ गते २:४५ मा प्रकाशित
किशोरावस्थामा म अलि लजालु स्वभावको थिएँ । केटीहरूसँग घुलमिल हुन लाज लाग्थ्यो । अर्कोतिर आफूलाई रूपले पनि ठगेजस्तो लाग्थ्यो, त्यसैले केटीहरूलाई एप्रोच गर्ने आँट गरिहाल्दैनथेँ । यति हुँदा पनि १३ वर्षकै उमेरमा मैले गर्लफ्रेन्ड भने बनाइसकेको थिएँ । उनी टोलकै सबैभन्दा राम्री केटी थिइन् । उनी कसरी मप्रति आकर्षित भइन्, मेरी गर्लफ्रेन्ड बनिन्, म आफैँ पनि जान्दिनँ । मभन्दा तीन वर्ष जेठी थिइन्, तीनै वर्ष चल्यो हाम्रो अफेयर पनि । त्यसपछि उनी अर्कैसँग बिहे गरेर गइन् ।
अफेयर चले पनि हामीले एकअर्कालाई टच भने कहिल्यै गरेनौँ । अहिले सोच्छु– उतिबेला उनीसँग सेक्स गर्ने अवसर पाएको भए नाइँ त पक्कै भन्दैनथेँ होला । उनी बिहे गरेर गएको केही वर्षपछि म पनि अमेरिका गएँ । बियरहरू खान थालेँ । त्यसपछि मात्रै हो, मैले केटीहरूसँग राम्ररी खुलेर कुरा गर्न थालेको । त्यसअघि त आँटै आउँदैनथ्यो । बोल्न थाले पनि बोली अकमकिन्थ्यो । मेरो त्यो पहिलो प्रेमसम्बन्धबारे मेरी श्रीमतीलाई पनि थाहा छ । लाग्छ– त्यो उमेरमा केटाको केटीसाथी र केटीको केटासाथी हुनैपर्ने रहेछ, नत्र त जीवनै निरस लाग्थ्यो होला ।
१३–१४ वर्षको उमेरदेखि नै टोलमा दादागिरी गरेर हिँड्थँे म । कपाल रंग्याएर कानमा कुन्डल लगाउँथेँ । काठमाडौंमा पहिलोचोटि कपाल रंगाउने मै हुँ जस्तो लाग्छ । दादागिरी गरेर हिँड्दा पुलिसको गोदाइ त कति भेटियो–भेटियो † उमेर सानै भए पनि टोलमा ‘दादा’ भनेर चिन्थे मान्छेहरू । त्यसैले होला, म फुच्चेलाई २०–२५ वर्षका लक्काजवानले पनि दाइ भन्थे । मेरा समकालीन साथीहरू नै मभन्दा ८–९ वर्ष जेठा थिए । साथीहरूको लहलहैमा लागेर १४ वर्षकै उमेरमा एकचोटि वेश्यागमन गरेँ । मभन्दा दोब्बर उमेरकी केटी पो परिछ । मभन्दा जेठा साथीहरूले आफैंलाई ठीक हुनेचाहिँ खोजेछन् । त्यही बेला मैले पनि पहिलोचोटि यौनसम्बन्धको अनुभव लिएँ । स्वर्गीय आनन्द भेटेझैँ लागेको थियो । त्यसभन्दा अघि त मैले हस्तमैथुन पनि गरेको थिइनँ ।
पत्नीबाहेक मैले ८–९ जनालाई गर्लफ्रेन्ड बनाएँ । केटीलाई ‘इम्प्रेस’ गर्न सक्ने खुबी कति रहेछ भनेर आफूलाई जाँचिरहेको हुन्छु बेलाबखत । जब इम्प्रेस्ड हुन थाल्छन्, तब ती केटी मलाई मन पर्न छाड्छन् । त्यसभन्दा अघि बढ्दिनँ । कारण– आफ्नो इम्प्रेसिङ पावर जाँच्ने उद्देश्यले मात्र त्यसो गरेको हुन्छु ।
यौनसम्पर्क एकदमै गर्न रुचाउने मान्छे हुँ म । तर, मैले केटीहरूलाई अनावश्यक युज गरेर नाजायज फाइदा भने अहिलेसम्मै उठाएको छैन । कसैले आफैँ इच्छा राख्छ भने त अहिले पनि पछिचाहिँ पर्दिनँ । पार्टनर नभएको बेला हस्तमैथुन पनि काफी हुन्छ । लुकाउनुपर्ने विषय नै होइन यो । किनकि, यौनआनन्दबाट वञ्चित भएर कोही पनि बाँच्न सक्दैन । सबैले यौनतृष्णा मेटाउने कुनै न कुनै उपाय अपनाएकै हुन्छन् ।
मलाई सबैले केटीको मामिलामा ‘फर्वार्ड’ को उपाधि दिन्छन् । अरूको नजरमा त्यस्तो देखिन्छु पनि होला । तर, म आफैँलाई चाहिँ अरूले भनेजत्तिको फरवार्ड हुन नसकेजस्तो लाग्छ । मेरो खुबी यति मात्रै हो कि म केटीलाई खुट्टामा ढोगेर हुन्छ कि शब्दहरूको लेप लगाएर, एकान्तमा लैजान सक्छु । तर, घात हुने काम गर्न सक्दिनँ । मभन्दा फर्वार्ड मान्छे धेरै छन् । जो हेर्दाचाहिँ सोझा हुन्छन् तर मौका मिल्नासाथ केटीहरूलाई सिध्याइहाल्छन् । त्यसैले म त देखावटी फरवार्ड मात्र हुँ भन्ने लाग्छ, आफैँलाई ।
मैले बिहेचाहिँ १७ वर्षअगाडि गरेको हुँ । मेरी पत्नीको नाम मंगला हो । उनीसँग पहिलो भेट प्रज्ञाभवनमा भएको थियो, एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा । पहिलोचोटि देख्दै उनी यो धर्तीकी नभएर अर्कै ग्रहबाट आएकी सुन्दरीझैँ लाग्यो । व्यावसायिक डान्सरका रूपमा चिनिन्थिन् । अहिलेका केटीहरूको त के बडी हुन्छ र ? उनको बडी साँच्चै लोभलाग्दो थियो । मैले त्यस बेलासम्म देखेका काठमाडौंका केटीहरूभन्दा धेरै नै राम्री । विस्तारै बहाना बनाएर म उनीसँग नजिकिन थालेँ । त्यो निकटता बढ्दै गएर मित्रतामा परिणत भयो । अनि मित्रता झाँगिँदै गएर मायाप्रीतिको रूप लियो ।
प्रेममा परेपछि हामी जोडी पन्छीजसरी निस्फिक्री घुम्न गइरहन्थ्यौँ । सोही क्रममा यौनसम्बन्ध पनि भयो । त्यसपछि त उनी मलाई झन् माया गर्न थालिन् । सुरुमा म उनीसँग विवाह नगर्ने विचारमा थिएँ । उबेला मन केही स्वार्थी पनि थियो । सेक्स नभएको भए सायद उनीसँग बिहे हुँदैनथ्यो, हामीबीच निकटता पनि बढ्दैनथ्यो होला । घुम्न जाने क्रममा उनैलाई धेरै खर्च गराउँथेँ । गाडीमा पेट्रोल हुँदैनथ्यो । पकेट हुन्थ्यो, पैसा हुँदैनथ्यो । सबै उनैले जुटाउँथिन् । म एकदमै फ्रयाङ्क स्वभावको छु, जहाँ पनि उनका अघि नांगै नुहाइदिन सक्थेँ । त्यसै कारणले पनि हो, बिहेअघि नै उनीसँग सबै कुरा भइसकेको ।
विवाह गर्ने कुरो चलेपछि मैले एक जना दाइलाई सोधेँ । उहाँले भन्नुभयो– ‘बिहेजस्तो कुरामा दोधारमा बस्नुहुन्न । कि गरिहाल्नुपर्छ कि छोडिहाल्नुपर्छ, अल्झिएर बस्नुहुँदैन ।’ मैले आफूलाई दोधारमुक्त गरेँ, अनि बिहे गर्ने निधो गरेँ । मेरो परिवार एकदमै खुसी भयो किनकि उनीहरू मलाई वर्षौंअघिदेखि बिहेका लागि फोर्स गरिरहेका थिए ।
भेट भएको करिब दुई वर्षपछि सन् १९९५ मा हाम्रो बिहे भयो । मलाई गानाबाजा बजाएर परम्परागत शैलीमा बिहे गर्न मन थिएन । बुबालाई घुक्र्याएँ– ‘धेरै साथीभाइ बोलाएर रक्सीमा डुब्दै रमाइलो माहोलमा बिहे गरिदिने भए मात्र म राजी हुन्छु ।’ बुबाले मैले भनेजस्तै वतावरण तयार गरिदिनुभयो ।
विवाहपछिको लाइफ एकदमै टेन्सनयुक्त लाग्न थाल्यो मलाई । उतिबेला उति धेरै मन परेकी मान्छे, अब त उनले मुसुक्क हाँसेको देख्दा पनि रिस पो उठ्न थाल्यो । अरू केटीहरूसँग रमाइलो गरिरहुँजस्तो लाग्थ्यो । यही कारण घरमा डिस्कस चलिरहन्थ्यो । झन्डै दुई वर्ष यसै गरी बित्यो । हामीबीच डिभोर्ससम्मका कुराकानी हुन थाले । झगडाले कहिलेकाहीँ कुस्तीको रूप पनि लिन्थ्यो । कुस्तीमा चाहिँ उनैले मलाई पछारिहाल्थिन् । टोलका अरू केटाहरूसँग कुस्ती खेलेजस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र श्रीमतीसँग † आफू जंगेर गयो, उनले परैबाट मलाई लडाइहाल्छिन् । उतिबेला मलाई आफ्नो जीवनमा पत्नीको कत्रो भूमिका हुन्छ भन्ने कुनै ज्ञानै थिएन । अहिले सोच्छु– उनी नभएको भए म यो स्थानमा पुग्नै सक्दैनथेँ होला ।
वैशाख महिनासँग हाम्रो विशेष संयोग छ । उनीसँग भेट वैशाखमा भएको थियो, बिहे भयो वैशाखमै अनि छोरा जन्मिएको पनि वैशाखमै हो । बिहेको एक वर्षपछि छोरा भूपेश्वर जन्मियो । मेरो बुबाको नाम भुवनेश्वर भएकाले त्यही नामसँग मिलाउन उसको नाम भूपेश्वर राखिएको हो । केही वर्षपछि छोरी यशश्री जन्मिइन् । उनको नामचाहिँ मेरो नामबाट प्रभावित छ । बिहेको केही वर्ष तनाबमा बिते पनि बच्चा भइसकेपछि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुँदै गयो । म पनि व्यावहारिक हुन थालेँ । बच्चा हुर्काउनमा पत्नीलाई निकै सहयोग गरेँ । गर्भवती छँदा पनि उनलाई निकै हेरबिचार गर्थें । त्यो बेला राति ३ बजे भोक लाग्यो भन्थिन् । म जुरुक्क उठेर किचेन पुग्थेँ, अनि आधा घन्टामै तीन थरी परिकार बनाएर उनका सामु हाजिर गराउँथेँ । बच्चा जन्मिएपछि आची धोइदिनेदेखि सबै कुराको अनुभव मैले पनि लिएँ, जिम्मेवार अनि असल पिता बनेर । उनलाई अप्ठेरो पर्दा कपडा धोइदिन पनि तयार छु । तर, घरमा काम गर्ने मान्छे भएकाले अहिलेसम्म आफूले कपडा धुनुपरेको चाहिँ छैन । पत्नीलाई थकाइ लाग्दा कहिलेकाहीँ खुट्टा पनि मिचिदिन्छु । पुरुषहरूले यौनान्दनका लागि महिलाको शरीर सुमसुम्याउन हुने, उनीहरूलाई थकाइ लाग्दा खुट्टा मिच्नचाहिँ किन नहुने ? मेरो खुट्टा दुख्दा पनि त उनी मिचिदिन्छिन् नि †
अहिले त उनी लन्डनमा छिन् । छोराछोरी त्यहीँ अध्ययन गरिरहेकाले उनी अभिभावकका रूपमा बसिरहेकी हुन् । म पनि केही समयअघि मात्र नेपाल आएको हुँ । बिहेको यतिका वर्षपछि पनि हाम्रा आपसी फिलिङ प्रेमीप्रेमिकाका जस्ता छन् । उनी मलाई कामुक एसएमएस पठाइरहन्छिन् । केही समयअघिको एउटा एसएमएसमा ‘न्यानो अंगालो’ जस्ता आत्मीयतापूर्ण भावना सेन्ड गरेकी थिइन् । ती शब्द सापटी लिएर मैले एउटा गीत तयार पारेको छु । केही समयपछि एल्बममा आउँदै छ । उनी फोनमा भन्छिन्– ‘तपाईंबिना छटपटिएर मर्न लागेँ ।’ मेरो हालत पनि कहाँ ठीक हुन्छ र ? उनी नहुँदाको क्षण उनैलाई सम्झिएर हस्तमैथुन गर्दै बिताउँछु ।
मेरो बुझाइमा प्रेमको दायरा सीमित हुँदैन । यति फराकिलो हुन्छ नि, जति जनालाई बाँडे पनि हुन्छ । त्यही प्रेम नै सेक्सजस्तो लाग्छ । अनि त्यो खुला प्रेम किन एक जनासँग मात्र सीमित राख्ने ? हुन त हाम्रो सामाजिक नियमले एक जनासँग मात्र जीवन बिताउनु राम्रो ठान्छ । मेरो बुझाइमा त त्यो प्रेम होइन, बन्धन मात्र हो । प्रेम आफैँमा मुक्त हुन्छ, अनि त्यो मन मिलेसम्म जति जनासँग पनि बाँड्न सकिन्छ ।